ကလေးကို ရေချိုးခြင်း ။ | အ မှတ် တ ရ ။
စိန်တုံးကြီး အရွယ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျောင်းမသွားခင် အရွယ်လေးတွေကို အဓိကထားပြီး ဆောင်းးပါး တစ်နှစ်ခွဲ ခန့် ကြာအောင် ရေးနေသော ဒေါက်တာရဲကို မသက်(ခင်သက်ဦး)က စိတ်မရှည် ဖြစ်လာ ဟန်တူသည်။ နိုင်ငံခြားက စာအုပ်တွေ ဝယ်လာသတဲ့။ တခြား အကြောင်း ပြောင်းရေးလို့ ရအောင်တဲ့။ရေးနိုင်ပေါင်ဗျာ။ စိန်တုံးကြီးတွေ အကြောင်းက ရေးလို့မှ မဝသေးတာ။ ဒေါက်တာကတော် လည်း နာဂစ် ရန်ပုံငွေ စာအုပ်အရောင်း ပွဲတော်မှာ စာအုပ်တွေ သွားဝယ် လာသေးတာပဲ။ ဖတ်ကြည့်တော့ သိပ်မကြိုက်။ မသက် စာအုပ်ကတော့ ကြိုက် မကြိုက်ပင် မပြောနိုင်သေး။ မသက် ထုံးစံအတိုင်း `ဆရာ့ဆီ လာပေး မလို့´ ဟုဆိုလျှင် နှစ်လ၊ သုံးလတော့ စောင့်ရမည်။
ကိုင်း…ဒီ တစ်လ တော့ စိန်တုံးကြီး တို့၏ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု ပြဿနာလေး တွေ နည်းနည်း ဆွေးနွေးကြပါစို့။
ရေချိုးခြင်းကလေးကို တစ်နေ့ကို ဘယ်နှကြိမ်မှ တစ်ခါ ရေချိုးပေးမယ်လို့ ပုံမှန်ရယ်လို့တော့ မရှိ။ ရာသီဥတု အေးလျှင် တစ်မျိုး၊ ပူလျှင် တစ်မျိုး တော့ရှိမည်.။ အညာမှာ တော့ လူကြီးတွေကအစ ရေကြောက်ကြတယ်။ကလေးကို မွေးကတည်းက ခြောက်လသား အထိ ရေနှစ်ခါသာ ချိုးပေးဖူးသော မိဘ အကြောင်းကိုကျွန်တော် ဆောင်းပါး ထဲ ထည့်ရေးခဲ့ဖူးသည်။ကလေးကို ရေမချိုးပေးသဖြင့် ကြေး(ဂျီး)ထူရာက အနာပေါက်၊ အနာပေါက်ရာက ကျောက်ကပ် ရောင်သည့်ကလေးတွေ တွေ့ရတာ များလွန်း သဖြင့် `ရေမချိုး လို့ မဖြစ်သည့် ရောဂါ´ အမည်ဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောင် ရောဂါ အကြောင်း လည်း ရေးခဲ့ ဖူးသည်။ ရေချိုးသည့် နေရာမှာကလေး ဖျားလျှင် ရေချိုးလို့ ဖျားတာဟု သတ်မှတ် ပါက မိုးရွာတာ ဖားအော်လို့ ဆိုတာမျိုး ကြုံသလို အတင်းဆွဲ ဆက်စပ် ယူထားသည့် အခြေ အမြစ် မခိုင်လုံ၊
အနှီးလောင်တာအနှီး သို့မဟုတ် Diapper ခေါ် သေးခံ လောင်တာ တစ်နှစ်အောက် အရွယ်ကတည်းက ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည့် ပြဿနာပါ။ တချို့ကလေးတွေ စိန်တုံးကြီး အရွယ် အထိ သည်ပြဿနာ ဆက်တက် နေရ ပါသည်။ နေ့ခင်းမှာ ရှူးရှူးပေါက် မချတတ် တော့တာ အသက် နှစ်နှစ်၊ ညမှာ ပါ ပေါက်မချ တတ်တော့သည့် အရွယ်က လေးနှစ်ပါ။ နေ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ညပဲ ဖြစ်ဖြစ် အီးအီး ပါမချ တတ်တော့ တာက သုံးနှစ်ပါ။
ရွှေပန်းထိပ်က အရေပြားလေး ဖြတ် ဖို့ လို မလိုမွေးကင်းစကလေး ဘဝကတည်းက ဘာသာရေး အရ ဖြတ်သူတွေ လူမျိုး ဓလေ့ ထုံးစံ အရ ဖြစ်သူတွေ ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်လျှင်လည်း အဲသည် အရေပြားလေး နှင့် အောက်က ဂျိုးထိပ်လေးကြား အိတ်လေးလို ဖြစ်နေသော နေရာလေးမှာ ဖြူဖြူ နှစ်နှစ် ရှူးရှူး ဂျိုး တွေ Smegma လာကပ် နေတတ်ပါသည်။ အဲဒါတွေ ရှိနေလျှင် ရေရှည် နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာသောအခါ သူ့ကျန်းမာရေးရော၊ သူယူမည့် ဇနီးကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက် နိုင်ကြောင်း တော်တော် များများ သိကြသည်။ ဒီ နိုင်ငံမှာတော့ ဒါ ပုံမှန် ဖြတ်နေကျကိစ္စတော့ မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ကလေး ဆရာဝန်တွေကလည်း အဲသည်ကိစ္စ လာတိုင်ပင်လျှင် သဘောပဲ ဟု ပြောလေ့ ရှိသည်။
တော်တော် အမေး များသည့် မေးခွန်း တွေပါ။ဒီကိစ္စကို အရင် ဆောင်းပါးတွေ မှာလည်း ကျွန်တော် မရေးခဲ့စဖူး။ တိုက်ဆိုင်၍ အရင် စိန်တုံးကြီးများ အကြောင်းထဲမှာ လာရေးပြ တာပါ။ သည့်ပြင် အရွယ်တွေ အတွက်လည်း အသုံးတည့် နိုင်ပါသည်။
စိန်တုံးကြီး တို့ကျန်းမာ သက်ရှည် ရောဂါကင်းကြပါစေ။ဆန္ဒမွန်ဖြင့်
« ပြောမရ၊ ဆိုမရကလေးဆိုတာ ။
ရင်ကျပ်ပန်းနာ ဆိုလိုက်တာနှင့် ။ »
Anonymous (03:46:18) : [u][b]Xrumer[/b][/u][b]Xrumer SEO ProfessionalsAs Xrumer experts, we possess been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] quest ofawish leisure conditions and grasp how to harness the titanic power of Xrumer and build it intoaCash machine.We also provender the cheapest prices on the market. Many competitors devise order 2x or square 3x andaa pile of the term 5x what we responsibility you. But we believe in providing great accommodation atasmall affordable rate. The whole point of purchasing Xrumer blasts is because it isacheaper surrogate to buying Xrumer. So we focusing to keep that thought in rebuke and yield you with the cheapest standing possible.Not solitary do we take the most successfully prices but our turnaround heyday for your Xrumer posting is wonderful fast. We drive pull someone's leg your posting done to come you discern it.We also cater you withaample log of successful posts on contrary forums. So that you can see over the extent of yourself the power of Xrumer and how we be struck by harnessed it to gain your site.[/b][b]Search Engine OptimizationUsing Xrumer you can expect to distinguish thousands upon thousands of backlinks over the extent of your site. Many of the forums that your Site you settle upon be posted on oblige high PageRank. Having your association on these sites can categorically mitigate build up some top rank back links and really boost your Alexa Rating and Google PageRank rating owing to the roof.This is making your instal more and more popular. And with this developing in popularity as well as PageRank you can expect to see your area really downright high in those Search Locomotive Results.TransportThe amount of see trade that can be obtained nearby harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your situation to tens of thousands of forums. With our higher packages you may even be publishing your locality to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Create 1 collection onapopular forum disposition by rig out 1000 or so views, with communicate 100 of those people visiting your site. Modern assume tens of thousands of posts on popular forums all getting 1000 views each. Your freight ordain go sometimes non-standard due to the roof.These are all targeted visitors that are interested or curious in the matter of your site. Deem how assorted sales or leads you can fulfil with this titanic gang of targeted visitors. You are in fact stumbling uponagoldmine primed to be picked and profited from.Keep in mind, Transport is Money.[/b]BECOME ENTHUSIASTIC ABOUT YOUR INFERIOR BLAST TODAY:http://www.xrumer-seo.com
Anonymous (12:03:52) : Look at Our Bereavement of consciousness Prices at http://www.Pharmashack.com, The Remarkable [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's boutique [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Gargantuan Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Be subjected toaMammoth Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In shore up of Your Viands ! We Hawk Hawser of exploit mark point escape as [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !
Anonymous (15:30:51) : You could easily be making money online in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat videos[/URL], You are far from alone if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses not-so-popular or little-understood avenues to generate an income online.
Anonymous (19:26:10) : Me and my friends always enjoy FlipBooth videos from this site all the time! I love it! I love to chat with new found filipino friends, also. The site have great pinoy channels, and pinoy music videos. I love Flipbooth! Thank you very much FlipBooth!
Anonymous (13:17:32) : Me and my brother always enjoy pinoy tv from this website every day! I really enjoy it! I love to chat with new found pinay friends, also. The site have great pinoy channels, and pinoy music videos. I love Flipbooth always!
Anonymous (13:52:57) : Me and my family always watch FlipBooth videos from this website everyday! I really enjoy it! I love to chat with new found Pinoy friends, also. They have great Pinoy clips, and Pinoy music videos. I love Flipbooth always!
Anonymous (05:11:28) : [url=http://www.onlinecasinos.gd]online casino[/url], also known as medic resources casinos or Internet casinos, are online versions of presentation ("crony and mortar") casinos. Online casinos encouragement gamblers to filch up and wager on casino games with the aid the Internet. Online casinos habitually speculation on the vend odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos label higher payback percentages withagauge common sense advocate gismo games, and some coach the expos‚ in payout stake audits on their websites. Assuming that the online casino is using an fittingly programmed unsystematically troop generator, catalogue games like blackjack substantiate an established congress edge. The payout apportionment asareplacement fit these games are established during the rules of the game. Incalculable online casinos engage in eyesore or triumph their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Supranational Design Technology and CryptoLogic Inc.
Anonymous (23:26:04) : Your wrіtе-up feаtures cоnfiгmed useful to me personаlly. It’ѕ really informatіve and you are nаtuгаlly ѵery κnοωleԁgeable in this area.You get ρoppeԁ mу personal eye for yоu to numеrouѕ thoughts about thіs specific mаtter аlong with intrіguіng,notable and sound cоntent.Also see my web page: http://www.kokchapress.net